About MFF	Myanmar Fisheries Federation
MFF was founded in 1989 as one of the highest national level for business organization withaview to enourage and promote the fishery industries of Myanmar.
3. Functional Associations under the umbrella of MFF (1)
- Undertaking rehabilitation works for the fishery communities struck by the Cyclone Nargis and Cyclone Giri
Providing cash and king assistance for the fisherman who are victims of disasters in co-operation with Action Aid INGO
Establishing relations with government organization, NGOs and INGOs such as USAID, World Fish, Winrock International, USSEC (U.S Soybean Export
Council), Oregon State University
Co-operations with Network Activities Group (NAG) NGO
Holding weekly regular discussion sessions for the livestock and fisheries enterpreneurs
Settling disputes regarding fishery matters among entrepreneurs
Holding seminars and talks on specialized subjects in collaboration with Myanmar Shrimp Association
Conducting training courses on fish/ prawn cultivation -
Sending Myanmar students to undergo fishery and agricultural on job training in Israel under the scholarship programme by MFF and Embassy of Israel
Attending conferences, workshops and seminars at home and abroad
Establishing relations with governmental organizations, NGOs and INGOs
Issue of the Country of Origin Certificate
7. Strength of MFF Membership
ရေလုပ်ငန်းပညာရှင်များအသင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအသင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အဖြစ်အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့
(၁၅-၅-၁၉၈၉)(၁၉၉၄)(၁-၁၂-၁၉၉၈) အဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်မှုဖြင့့်် ဖွဲ့စည်းထားသည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းများ
မြန်မာနိုင်ငံငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည် ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်သူများအသင်း
အဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်မှုဖြင့့်် ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပြည်နယ်/တိုင်းအဖွဲ့ချုပ်များ (၁၃)သင်း
အဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ခရိုင်အဖွဲ့ချုပ်များ (၂၆)သင်း
အဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲ အဖွဲ့ချုပ်များ (၅၃)သင်း
၃၁-၁၂-၂ဝ၁၄ ရက်နေ့ရှိ အဖွဲ့ချုပ်အသင်းဝင်ဦးရေ
အဖွဲ့ချုပ်သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်သည့် ''က''အဆင့် အသင်းဝင်(ကုမ္ပဏီ) -
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းများမှ ဝင်ရောက်သည့် "က"အဆင့်အသင်းဝင်(တစ်ဥိးချင်း) -
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းများမှ ဝင်ရောက်သည့် "က"အဆင့်အသင်းဝင်(ကုမ္ပဏီ) -
ဖွဲ့စည်းထားသည့်အမြဲတမ်းကော်မတီများ (၈)ခု (၁) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ
သတင်း၊ ပြန်ကြားရေး၊ နည်းပညာ၊ လူမှုရေးနှင့်ပညာရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Seminar များ၊ Workshop များ၊ သင်တန်းများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများ ပုံမှန်ကျင်းပ ပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။
သားငါးကဏ္ဍ ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည် အစီအစဉ်များ
၂ဝဝ၅ခုနှစ် ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့မှ စ၍ သားငါးကဏ္ဍ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ ပုံမှန်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ပုံမှန်ကျင်းပ ပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။ Local News